Accueil > Gazetin'ny nosy > Antsirabe : ratsy ny lalana
Antsirabe : ratsy ny lalana
Misedra olana ny mponina eto Antsirabe I noho ny haratsian’ny lalana indrindra amin’izao fahavaratra izao, raha ny hita dia saika ny lalana rehetra eto Antsirabe no ahitana fahasimbana.
Maro no sahirana noho ny haratsian’ny lalana, voakasik’izany indrindra ireo fiara mivezivezy eto amin ny tanàna , ireo mpitantitra vokatra.
Miparitaka aoka izany ny fako sy ny loto vokatrin’ ny fahatsetseman’ny fanarian’ny rano. Misy ihany ny fanamboarana saingy vonji-tavan’andro toy ny fanapenana katsaoka izay tsy maharitra fa vao maika mahabe fotaka indrindra rehefa avy ny orana.
Nisy ihany ny mpitondra izay manome toky hanamboatra ny lalana nefa dia tsy misy ny fanamboarana hatramin’izao, marihina anefa fa efa ela ihany no hita fa simba tanteraka ny lalana eto Antsirabe. Manao antso an’ ireo tompon’ andraikitra mba hijery akaiky ny momba ity lalana eto Antsirabe ity fa miaina anaty fijaliana ny mponina indrindra amin’izao fotoanan’ny fahavaratra izao , ny fiparitahan’ ny loto sy ny fako izay mety hitondra valan’aretina maro.
Seran-tsakafo ho an’ny reny sy ny zaza
Zava-dehibe ho an’ny reny sy ny zaza indrindra ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, izany indrindra no nanaovana ny hetsika seran-tsakafo ny tontolo andron’ny alakamisy 14 lasa teo. Ny seran-tsakafo izay tetik’asa iresahana amin’ny ankapobeny ny sakafo sy ny fahalasalaman’ ny zaza latsakin ‘ny 5 taona , vehivavy mitondra vohoka ary mampinonono. Raha ny fantatra dia paik’ady hapetraka ato anatin’ny dimy taona ny hampihenana faran’izay ambany ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eo amin’ny zaza hatrany am-bohoka hatramin’ny faharoa taonany.
Hatreto ny fomba entina miady amin’izany dia ny fanentanana ny vahoaka , eo ihany koa ny fanomezana hafatra goavana hoe tsy voatery ho mila vola ambonin’ny sakafo ara-pahasalamana, ny fotoana lany amin’ny fikarakarana ny sakafo andavan’andro ihany dia ampy hikarakarana ny sakafo ara-pahasalamana ho an’ny zaza, ny vokatra hita eo an-toerana amin’ny vanim-potoana dia ampy ho sakafo ara-pahasalamana.
Araka ny fantatra dia misy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny banky iraisam-pirenena amin’ny famatsiana ara-bola, tsikaritra anefa fa betsaka ihany ny tetik’ asa atao entina hampandrosoana, ary voalaza ihany koa ny fanampian ireo malala-tanana miasa, ny hita anefa dia vitsy ny zava-bita na eo aza ny hoe manao zavatra tsy mora.
Satria mbola tsy hita miharihary ny fimenomenonan’ny mponina amin’ny asarotan’ny fiainana. Inoana kosa fa voarain’ny mponin’ny Vakinankaratra ity fanentanana natao androany ity ka anjaran’ny tsirairay ny hampiantra na tsia.